नेइमारलाई ६ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेइमारलाई ६ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने !
एजेन्सी । सन् २०१३ मा सान्तोषबाट बार्सिलोनामा स्थानान्तरणको बेला घोखाघडी र भ्रष्टाचारको आरोपमा नेयमारले ६ वर्ष जेल सजाय भोग्न सक्ने एक स्पेनिस न्यायाधीशले बताएका छन् ।
ब्राजिलियन इन्भेस्टमेन्ट फर्म डिआईएसले उक्त सम्झौताबिरुद्ध उजुरी गरेपछि नेयमारमाथि समस्या बढेको हो । उक्त कम्पनीले सो सम्झौताको वास्तविक रकम गैरकानूनी रुपमा लुकाइएको कारण आफूहरुले कम रकम प्राप्त गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेयमार सन् २०१७ मा विश्वकै महङ्गो खेलाडी बन्दै २० करोड पाउण्डमा बार्सिलोनाबाट पेरिस सेन्ट जर्मेनसँग आबद्ध भइसकेका छन् । स्पेनमा २ वर्ष वा सोभन्दा कम सजायमा जेल जान पर्दैन तर नेयमारबिरुद्ध सोभन्दा बढी जेल सजाय माग गरिएको छ ।
नेयमारको साथै उनको आमाबाबु, बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउ र पूर्व अध्यक्ष सान्ड्रो रसलबिरुद्ध पनि मुद्दा छ । यही काण्डका कारण रसलले सन् २०१४ मा क्लबको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
स्पेनको अदालतले नेयमारको मुद्दालाई तीन न्यायाधीशको ठूलो बेञ्चमा पठाउने फैसला गरेको छ । जानकारीका अनुसार ८.६२ करोड युरोमा नेयमार बार्सिलोना आए पनि त्यतिबेला क्लबले करिब ४ करोडमा उक्त सम्झौता भएको जानकारी दिएको थियो । यद्यपी, ठूलो बेन्चले यसबारेमा सुनवाई कहिले शुरु गर्छ भन्ने कुराको अझै फैसला भएको छैन । यसबारेमा नेयमारको पनि केही बयान आएको छैन । रातोपाटीबाट
ट्याग्स: jail, Neymar